Wararka saakay laga helayo deegaano ka tirsan gobolka Mudug ayaa waxaa ay sheegayaan in halkaasi ay ka taagan tahay xiisad colaadeed oo u dhaxeysa laba Beelood oo xoolo dhaqato ah,kuwaas oo dagaalkooda uu yahay mid soo laab laabtay.
Xiisadaan ayaa waxaa ay ka taagan tahay degmada Galdogob ee gobolka Mudug, waxaana la sheegay inay timid kadib markii mid ka mid ah dadka Xoolo dhaqatada ah lagu dilay deegaanka Taaroge oo hoostaga degmada Galdogob.
Wararku waxaa ay intaasi ku darayaan in labada beelood maleeshiyaadkooda uu dhexmaray dagaal kooban oo ilaa iyo hadda aan la cadeyn khasaaraha ka dhashay,waxaana dadka deegaanka ay sheegayaan inay cabsi dareemayaan.
Qaar ka mid ah waxgaradka degmada Galdogob ee Gobolka Mudug ayaa waxaa ay sheegayaan in ay wadaan qaban qaabo ku aadan sidii loo kala dhexgeli lahaa labada Maleeshiyo beeleed si colaada u dhaxeysa loo joojiyo.
Deegaano ka tirsan Bariga iyo Koonfurta Gobolka Mudug ayaa dhowr jeer waxaa ku dagaalamay laba maleeshiyo beeleed,kuwaas oo isku geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah wallow markii dambe dagaalkooda xal laga gaaray.